France Online egwuregwu ịkụ nzọ
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado ịkụ nzọ na ahịa French, ị nwere ike inwe mmasị na ịkụ nzọ egwuregwu France Pari nyere. Ikpokoro na-enye otutu uzo di iche iche maka ịkụ nzọ n’egwuregwu n’udo, ma gbalịsie ike irite uru dị ukwuu. Nke a bụ obere ederede ị ga-ama ihe niile gbasara France Pari Sportif na-enye n'ịntanetị.
Betdị egwuregwu egwuregwu dị iche iche na France Pari
Ma ị bụ onye mmalite ma ọ bụ nwee ahụmịhe nke ụwa nke ndị na - eme akwụkwọ, will ga-anụ banyere mkpokọta Paris na Paris jikọtara ọnụ. Ndị a bụ ụdị nzo abuo nke a na-ahụkarị na ebe ikpo okwu a, mgbe niile na itule n’etiti mmadu abuo. Na a karịa obi umeala nzọ ga-apụta isi nkwalite na ikpokọta nzọ nke a ga-ekpe ikpe site na obere ego ma ọ bụ mee ka nzọ sị "biko"
Ọ bụrụ na ị bụghị onye ukwu na-agba bọọlụ ịkụ nzọ, ịmara na na France ị nwere ike ịgba ọsọ na ịgba ọsọ ịnyịnya. N'ezie, ndị French nzọ iji nye ịkụ nzọ n'ịntanetị n'ịgba ọsọ kachasị ukwuu n'ụwa, enweghị ego iji merụọ onwe gị ahụ ma ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara na mpaghara a. Mgbe ị bụ ọkachamara n’ọhịa, inyinya ịkụ nzọ nwere ike ịnọchite anya ezigbo akwara. Ihe ị ga - agbakwunye bụ na nzọ a na-enyekwa ngwa ntanetị France Pari.
50€ KPỌR ONR ON EGO NA-EGO NIILE NA-EGO
Na koodu dere, egwuregwu ịgba ọsọ mbụ gị kwụghachi n'ụdị ihe funahụrụ.
Enwere ike igwu ịgba bọl asọmpi mbụ gị n'otu ma ọ bụ jikọtara.
Rịba ama na ọ bụrụ na nzọ nke mbụ lara, na akaụntụ ego gị, inara 20% nke ire ere mgbe nkwenye nke nsonaazụ ya 80% na-ahapụ mgbe nkwado nke akaụntụ gị.
Ka emechara, Ọ dị mkpa ka ị gụọ ego nke ego ma ọ dịkarịa ala ugboro atọ iji nwee olileanya ihichapụ (enwere ike ọ dịkarịa ala 1h10).
Ibepụta France Pari ndụ nzo
Saịtị a na-enye ịkụ nzọ egwuregwu dị mma, ya na ngalaba pụrụ iche ewepụtara maka isiokwu a. Ọ na-enye gị ohere isoro ndụ egwuregwu, ma nzọ n’otu oge, ya na mgbanwe ezigbo oge. Ngbanwe a choro ka ijikwa nzo, Were ohere ka ha na-eru elu.
Na mgbakwunye, na-ekwu maka ihe a niile na Paris, anyị akọpụtabeghị ụzọ dị iche iche nke nkwụnye ego na Paris. Nwere ike ịme mbufe dị mfe, dịka ọmụmaatụ site na MasterCard na Visa. Ma ọ bụrụ na ị bụghị onye buru ibu nke usoro a, you nwekwara ike idobe nza gị site na obere akpa elektrọnik ma ọ bụ kaadi akwụgo, ndị nwekwara uru ha na usoro ịkwụ ụgwọ. Ọ dịịrị gị ịhọrọ usoro ga-akacha gị mma!
Daashi France Paris
Mgbe ị debanyere aha na ikpo okwu France Pari, Mara na ị ga-eburịrị ụzọ nabata ego gị 200 €, ekwela 50 € nyere n'ịnyịnya na ịkụ nzọ na egwuregwu Paris. Agbanyeghị, ikpo okwu na enye ndi oru ya udiri ego na nkwalite ndi ozo. Anyị enweghị ike ịkọwa ikpe ahụ nyere egwuregwu cha cha na egwuregwu ụfọdụ, dịka ọmụmaatụ maka Njikọ Njikọ 1 ewepụtakwala ya n’ọtụtụ asọmpi isi, dịka ọ dị ugbu a na World Rugby World Cup. A na-agba ndị na-agba ọsọ ịkụ nzọ ume ka ha nọrọ n'ọnọdụ maka nzukọ iji hụ na egwuregwu mmeri gị na-arịwanye elu ọbụna karị. Know mara ma enwere koodu mgbasa ozi? Chọpụta ihe banyere koodu nkwado na France Pari.
Nke a bụ Ihe Anyị Pụrụ ịgwa Gị Banyere French Betets. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ma chọọ ịkụ nzọ ntanetị, egbula oge ịchọpụta ihe ọ bụ na ọ bụrụ na ọ ga-emezu ihe ị tụrụ anya ya. Oge gị!
Nwee obi uto € 50 TURF BONUS NA FRANCE PARI
50 A na-ekesasịkwaa ahịhịa ego euro na nkeji ole:
5 € sitere na 50 € ahịhịa mere
Agbakwunyere 5 € ka 150 € paris ịnyịnya
15% site na Paris ụdọ ụnụ akwụrụ akwụrụ 40 €
Naanị nzọ mere n'ime 30 ụbọchị mgbe edebanye aha na-ewere n'ime akaụntụ.
OWO : Ruo 50 € gbara akwụkwọ
25% nke grid ị na-eme maka onyinye a (kacha 50 €). Ihe onyinye a bara uru maka 30 ụbọchị mgbe nkwụnye ego mbụ gị gasịrị. Egbula oge ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ.
A naghị akwụ ụgwọ ego a na akpaaka. Kwesịrị ịrịọ maka ndị ahịa France Pari (n’ekwentị ma ọ bụ zitere anyị ozi) bụ maka ndị egwuregwu emeela ihe ndekọ ha (mbupu mbupu na mbata gị)
FP MANAGER : Ruo 50 € gbara akwụkwọ
Banyere ego grid, 25% achọrọ FP Manager emelitere (kacha 50 €). Ihe onyinye a bara uru maka 30 ụbọchị mgbe nkwụnye ego mbụ gị gasịrị. ya mere, anyị kwesịrị inwe ike irite uru ngwa ngwa.
Iji gbakee, oburikwa jikwaa grid. Anyị ga-enwe ike ịrịọ arịrịọ maka ọrụ ndị ahịa France Pari. Edebere ya maka ndị na-egwu egwuregwu ha dechara akaụntụ ọkpụkpọ ha. Ya mere, echefula izipu akwụkwọ gị ọsọ ọsọ.
Previous Previous post: Osiris Casino